Maxxansa foormoota gosa adda addaa | | Awash Tenders
Maxxansa Foormoota Gosa Adda Addaa
Adama, North Shewa (Amhara)
Ambo General Hospital
Kallacha Oromiyaa Oct1,2020
Caalbaasii Ifaa Lakk. 01/ 2013
Hospitaalli Waligalaa Amboo bara 2013 tiif Maxxansa foormoota gosa adda addaa labsii bittaa mootummaa naannoo Oromiyaa Lakk. 157/2002 fi qajeelfamaa bittaa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. 02/2004 irratti hundaa’uudhaan caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee maxxansisuu barbaada.
Caalbaasiin kun guyyaa Gaazeexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfame bahee calqabee gosa maxxansichaa fi odeefannoo waliigalaa formaatoota maxxansisamuuf barbaadaman kan ibsu sanada caalbaasii qopha’ee kan hin deebine qarshii 50 kaffaluudhaan yeroo hunda sa’aatii hojii hospitaala keenya kutaa adeemsa hojii bittaa fi bulchinsa faayinaansii dhufudhaan dokumanticha bitachuun ni danda’ama.
Ulaagaa dorgommii caalbasichafbarbaachisu
1. Gibira barichaa kan kaffalanii fi zarfii daldala Maxxansaa tiin heeyyama daldalaa haarome kan qaban, ragaa qabatamaa footokoppii isaa dhiyeessuu qaba.
2. Galmaa’aa Taaksii dabala qabeenyaa kan ta’anii fi footokoppii sartefkeettii VAT dhiyeessuu qaba.
3. Tarree dhiyeessitootaa keessatti kan galma’anii fi ragaa galmee dhiyeessummaa ministeera Maalaqaafi Walta’insa Dinagdee ykn caasaalee sadarkaan jiran irraa dhiyeessuu kan danda’an
4. Dorgomtoonni baayina gatii waliigalaa maxxansaa gosa akaakuu dookumantii tokko dorgoman irratti %1 kabachisa caalbaasii ykn maallaqa calla nagahee galii hospitaala keenyaa erga itti citeen booda koppiin nagahee kanaa sanada caalbaasii waliin poostaa saamsame faana dhiyaachuu qaba. Waldaaleen IMX haala sirreeffama dambii IMXf bara 2009 fi bara 2011 fooyya’ee bahe fi qajeelfamma BMWD Oromiyaa bara 2009 baaseen ta’uu qaba.
5. Dorgomtootnni gatii maxxansa tokkoo tokkoon ittiin dorgoman unka sanada caalbaasii irratti qofa guutuudhaan orjinaala fi koppii isaa adda addaatti chaappaa fi mallattoo tiin kan mirkana’e poostaa saamsameen caalbaasiin kun guyyaa gaazeexaa irratti bahee kaasee kan lakka’amu gaafa guyyaa hojii 16ffaa sa’aatii 8:00 irratti waajjira keenya armaan olitti ibsametti saanduqa caalbaasi kanaaf qopha’e keessa galchuu qabu Caalbaasiin kun guyyaa armaan ol lakkoofsa 5 irratti ibsame saʼaatii 8:30 irratti dorgomtoonnii ykn bakka bu’oonni seera qabeessa isaanii fii qaamoleen irratti hirmaachuu barbaadan bakka argamanitti ni banama. Dhaabbatni caalbaasicha galche ykn bakka bu’an jiraachuu yoo baates poostaan isaanii ni banama.
7.dorgomtoonni mo’atan yeroo waliigaltee mallatteessan waliigalaa maxxansa mo’atanii %10 wabummaa raawwii caalbaasichaa baankiidhaan kan raggaasifame(CPO) seera qabeessa ta’e dhiyeessuu qabu.dorgomtoonni mo’ataa fi mo’atamaan caalbaasicha erga ifa ta’ee waliigaltee mo’ataa waliin galmee booda kabachiisni caalbaasii duraa dookumantii caalbaasii wajjiin galchan battalumatti fudhachuu ni danda’ama.
8. Waldaaleen IMX kabachiisa caalbaasiichaa haala sirreeffama dambii IMXf bara 2009 fooyya’ee bahee fi qajeelfama BMWD Oromiyaa bara 2009 fi bara 2011 baaseen kan raawwatamu ta’a.
9.Dorgomtoonni caalbaasii kana mo’atan baasii kamiyyuu danda’uudhaan maxxansa irratti mo’atan mana kuusaa hospitaala Ambootti dhiyeessuu qabu.
10.kaffaltii maallaqa gatii maxxansaaf taasifamuuf akka mija’uu dorgoomaan mo’atee herreega baankii daldala Itoophiyaatii qabachuu fi beeksisuu qaba.
11. Gatiin dhiyeessii yeroo guutamu haqaa fi laaqa kan ofirraa hin qabne ta’uu qaba
12.Dorgomaan kamiyyu erga caalbaasichi banameen booda sanada Caalbaasichaa irratti kanneen ibsaman irratti geeddaruu,fooyyessuu ykn caalbaasicha dhiiseera jechuu hin danda’u.
13. Hospitaalichi mala isa fayyadu ykn filannoo biraa yoo argate caalbaasii kana guutumaa guutuus ta’ee gar- tokkee isaa haquuf mirga qaba. Hubchiisa ragaa dabalataaf lakk.bilbilaa 0112609384 Gosaa fi baayina maxxansaa sanada qopha’ee irratti tartiibaan ibsamee jira. Hospitaalli Waligalaa Amboo